DEG DEG+XOG: Madaxweynaha Galmudug oo loo soo jeediyey Is casilaad, Muxuuse kaga jawaabay? – Puntlandtimes
DEG DEG+XOG: Madaxweynaha Galmudug oo loo soo jeediyey Is casilaad, Muxuuse kaga jawaabay?
GAALKACYO(P-TIMES) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug ayaa sheegaya in ay wada hadalo xasaasi ah xalay yeesheen Madaxweynaha Galmudug iyo Senatoro kasocda Dawladda Faderaalka Soomaaliya, kuwaas oo diiradda lagu saarayay arrimaha hadda ka taagan Galmudug iyo sidii go`aan mideysan dhinacyadu uga gaari lahaayeen in ay maanta burburin Galmudug.
Wararka ayaa sheegaya in ay dhinacyadu aad iskugu jiid-jiidayaan arrimaha socda, isl amarkaasna ay kala taagan yihiin mawqifyo adag, gaar ahaana dhinacyada Dhuusa-Mareeb iyo Cadaado oo aad iskugu haya cidda ah Galmudugtii rasmiga ahayd.
Xog soo gaartay Puntlandtimes.com waxay sheegaysaa in Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Xaaf loo soo jeediyey in uu is casilo, taas oo ku noqotay talaabo uusan fileynin, gaar ahaana saameyn adag ayay ilaa hadda yeelatay.
Madaxweynaha Galmudug ayaa diiday talaabada kasoo yeeray xubnaha Aqalka Sare, balse dadaalo xoog badan ayaa socda oo ku wajahan sidii Galmudug gacmaha Xaaf looga dumi lahaa oo aysan u burburi laheyn, xili saaxiibadiisa Dawlad gobaleedyadu ay cadaadis ku saarayaan in uu is casilin.
Wararka soo baxaya ayaa cadeynaya in ay dhinacyadu aad iskugu hayaan arrimaha ka xal ka gaarista arrimaha taagan, waxaana shalay uu Madaxweynaha Galmudug la kulmay Saraakiisha iyo ciidamo daacad u ah oo u sheegay in ay u diyaar garoobaan sidii Galmudug gacanta maamulkeeda loogu soo celin lahaa, nabad looga dhigi lahaa, taas oo welwel ku beertay dhinaca ka soo horjeeda ee kusugan Cadaado.
Musharaxiin u tartamaysa xilka Xaaf ayaa kusugan magaalada Cadaado oo ay Sabtida berrito ah doonayaan in ay ku qabsadaan doorashada Madaxweyne-nimada, garabka uu horboodayo Madaxweyne kuxigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Carabay, waxaana muuqata in ay xaaladdu adag tahay oo ay socdaan dadaalo aan miro dhalkoodu wanaagsanan doonin.